ဘာသာကူးပြောင်းခြင်း၊ မြန်မာအမျိုးသမီးများ ဘာသာခြားနဲ့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း စတဲ့အမျိုး ဘာသာ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေးအတွက် ဥပဒေကြမ်း လေးခု ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်အတွင်းက ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ကန့်ကွက်သူ ထောက်ခံသူ အများအပြားရဲ့ ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေ ပေါ်ထွက်နေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ် NLD ပါတီ ဥက္ကဌ၊ တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဒေါ်ခင်မိုးမိုးနဲ့ ကချင် ငြိမ်းချမ်းရေး ကွန်ရက်က ဒေါ်ခွန်ဂျာတို့ကို ဆက်သွယ်ပြီး RFA အဖွဲ့သား ဦးခင်မောင်ညိန်းက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
It is amazing in targeting only Buddhist women. There is no option for other Burmese women who are not Buddhist. Another important question is how to apply in Buddhist men and other non-Buddhist women. Asaconclusion, it is justastupid minded policy.
Dec 26, 2014 04:19 AM
မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေကို ကာကွယ်ပေးဘို့ လုပ်တာ ဒီ မိန်းမ ၂ ယောက်က ဘာဖြစ်လို့မကြိုက်ကြတာလဲ။ မြန်မာမိန်းမတွေ ကုလားမယား ဖြစ်ကုန်စေချင်လို့လား
Dec 14, 2014 05:04 PM
Why you worried kalar? If myanmar woman wants to marry anybody else, that is their rights. please don't limit the rights.
Dec 16, 2014 02:10 PM
အခု ဒီ ဥပဒေ မရှိခင်မှာ မြန်မာမိန်းမ ရာခိုင်နှုံး ဘယ်လောက်ကများ ကုလားကို ယူနေကြလို့လဲ။ ဆင်းရဲလွန်းလို့ ကုလား ယူလိုက်ရတာ ရှိတယ် သူတို့ကျတော့ ထမင်းကျွှေးနိုင်မဲ့လု လိုနေတာကိုး။ အဲဒီ ဆင်းရဲသူလေးတွေအတွက် ကုလားကို မယူအောင် ဘာလုပ်မလဲ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်